coking ကျောက်မီးသွေးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကဘာလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်စက်ရုံများဖြစ်ပြီး, အားလုံးကြောင်းစွမ်းအင်တစ်ခုစီကိုနိုင်ငံ၏လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကတင်သွင်းသို့မဟုတ်ပို့ကုန်ရှိမရှိ ..
Кокс — твердый углеродистый остаток, образующийся при нагревании различных топлив (кам. угля, торфа и других органических веществ) до 950-1050 оС, без доступа воздуха (процесс называется коксованием). В черной металлургии наиболее распространен каменноугольный кокс, применяемый в качестве топлива в доменных печах и вагранках. Содержание углерода в коксе 96-98%, низшая теплота сгорания- около 29МДж/кг (7000 ккал/кг).
လောင်ကျွမ်းခြင်း (လောင်စာဆီအလေးချိန်) 30-36 MJ / ကီလိုဂရမ် (7200-8600 kcal / ကီလိုဂရမ်) ၏ကျောက်မီးသွေးတိကျတဲ့အပူမှာ။ ကျောက်မီးသွေး 75-97% များ၏ကာဗွန်အကြောင်းအရာ။
အဆိုပါမီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ဒြပ်ထု 22,6-31 MJ / kg ကျနော်တို့အညိုရောင်ကျောက်မီးသွေးလောင်ကျွမ်းအပူ (5400-7400 kcal / ကီလိုဂရမ်) ။ ကာဗွန်အကြောင်းအရာ 55-78%
အဆိုပါမီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ဒြပ်ထု 33,9-34,8 MJ / kg anthracite လောင်ကျွမ်းခြင်းအပူမှာ (8100-8350 kcal / ကီလိုဂရမ်) ။ ကာဗွန်အကြောင်းအရာ 895-96,5%
ကျောက်မီးသွေး coking ဖြင့်ရရှိသောဒါက tvrdy စိမ်ထုတ်ကုန်။ ဒါဟာလျှော့ချအေးဂျင့်အဖြစ်သတ္တုဗေဒအတွက်အသုံးပြုသည်။
သူကမစားဘဲနေခဲ့ပေ။ ဒါဟာဝက်သံများ၏ထုတ်လုပ်မှုအဘို့လိုအပ်ပါသည်။ တော့ဘူးဘာကြောင့်ပိုပြီးဖြစ်လာခဲ့သည်ဒါ။
Coke ကျောက်မီးသွေးကျောက်မီးသွေးအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသတ္တုဗေဒအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကျောက်မီးသွေးနှင့် lignite ရှိပါတယ် esch ။ တစ်ဦး vitrinite အလင်းပြန်မှုအညွှန်းကိန်း 0,9-1,29%, ပလတ်စတစ်အလွှာထူ 18 မီလီမီတာနှင့်အတူမီးခဲအဖြစ်ပုံမှန်ကျောက်မီးသွေးနှင့်ကိုကာကိုလာဖက်တီး, မတည်ငြိမ်သော 25-30% ၏အထွက်နှုန်းနှင့်အတူ: ကျောက်မီးသွေး Coking လည်းအများအပြားအမျိုးအစားများဖြစ်ပါသည်။
အဓိကစားသုံးသူအမှတ်တံဆိပ်ပျားအုံ Coke လုပ်ငန်း QoL ဖြစ်ပါတယ်။ Coke ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသောမီးခဲအပေါငျးတို့သအမှတ်တံဆိပ်၏, သူတို့ကအမြင့်ဆုံး Coke ရှိသည်။ high-quality သတ္တု Coke မီးခဲ၏အခြားအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူရောနှောခြင်းမရှိဘဲရယူနေကြသည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည် 20% Filler မီးခဲ CO, CS နဲ့ OS မှ Coke ၏အရည်အသွေးပြောင်းလဲနေတဲ့မရှိဘဲလက်ခံရရှိရန်တတ်နိုင်ကြသည်။
ကျောက်မီးသွေးနှင့်ကိုကာကိုလာညွှန်ပြချက် vitrinite% 1 မှ 1,29 ကနေအလင်းပြန်မှု, ကောင်းသော sinterability သွင်ပြင်လက္ခဏာ။ ပလတ်စတစ်အလွှာ၏အထူ vitrinite ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအညွှန်းကိန်း 13-17% နှင့် 1,0 မီလီမီတာနှင့်အ vitrinite အလင်းပြန်မှု 1,29-13% မြင့်မားအညွှန်းကိန်းနှင့်အတူမီးခဲအဘို့အ 1,3-1,69 မီလီမီတာဖြစ်ပါတယ်။ Devolatilization 24-24,9% အတွင်းဖြစ်ပါတယ်။
မီးခဲ၏အခြားအမှတ်တံဆိပ်သူတို့နှင့်အတူရောနှောခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးအေးစက်သတ္တု Coke သည်။ ရောထွေးမီးခဲက F, မီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့နှင့် QL ၏ငွေကျပ် 20-40% မီးခဲအထိမ်းအမှတ်သည့်အခါကိုကာကိုလာအရည်အသွေးကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် KO (ကိုကာကိုလာ otoschenny)
ကျောက်မီးသွေးနှင့်ကိုကာကိုလာ otoschennye ဒါပေမယ့်ပလပ်စတစ်အလွှာ 10-12 မီလီမီတာတစ်ဦးလျှော့ထူနှင့်တကွ, Coke မီးခဲနီးစပ်သူတန်ဖိုးများနှင့်အညီ, မတည်ငြိမ်သောတ္ထုများနှင့်အတူမီးခဲဖြစ်ကြသည်။ vitrinite အလင်းပြန်မှု 0,8-0,99% ။
တစ်ဦးကျောက်မီးသွေးများအပြင်နှင့်မီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ဂျေစေသည်အဖြစ်မီးခဲအမှတ်တံဆိပ် KO အဓိကအားဖြင့်သတ္တု Coke ၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်
မာကု SPE (Coke ကိတ်မုန် nizkometamorfizovanny)
ကျောက်မီးသွေးနှင့်ကိုကာကိုလာ nizkometamorfizovannye ကိုအားနည်းစွာ 0,8 ထံမှ 1,09% အထိအညွှန်းကိန်း vitrinite အလင်းပြန်မှု caking သွင်ပြင်လက္ခဏာ။ သည်အခြားကျောက်မီးသွေးနှင့်အတူရောနှောခြင်းမရှိဘဲ coking တဲ့အခါမှာသူတို့နည်းစနစ်နည်းနည်းအကြမ်းခံ, ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပွန်းစား Coke ပေးပါ။
အဆိုပါ Coke စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍနှင့်ပြည်တွင်းကဏ္ဍတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ SPE အမှတ်တံဆိပ်ကျောက်မီးသွေးလည်းဒြပ်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်။
မာကုရဲ (ကိုကာကိုလာ Cake)
ကိုကာကိုလာကိုအားနည်းစွာ caking မီးခဲ (ထိုပလပ်စတစ်အလွှာ 6-9 မီလီမီတာ vitrinite ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအညွှန်းကိန်း 1,1-1,69% ၏အထူအနိမ့် sinterability ရှိသည်။
ကျောက်မီးသွေး CS တန်းအဓိကအား emaciated အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် Coke စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ အပိုင်းကျောက်မီးသွေးစက်မှုဇုန်ဘွိုင်လာနှင့်ပြည်တွင်းကဏ္ဍတွင် stratified လောင်ကျွမ်းခြင်းအဘို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Posted in, Macroeconomics
63 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,230 စက္ကန့်ကျော် Generate ။